Ngaphambi kokubheka ngenxa yomsebenzi, into eyodwa ukuthi wonke umuntu ngokuvamile ubheka imali noma iholo. Yebo, passion yilokhu kuholela empumelelweni kodwa ekupheleni kosuku, uma uya emuva ekhaya ukhathele, okudingayo induduzo kanye okunethezeka. Ngakho, ke Kuhlala kungcono ukubeka umgomo wakho ezingeni ukuphakama enkulu lapho ungakwazi yini ukukhokhela zonke izinto wenduduzo kunokuba nokubeka imigomo emincane. Kukhona imisebenzi ethile ehambisana eziningi ozitholayo kanye iholo. Following is a list of some of the top career options that would support you efficiently both financially and prestige wise.
Esikhathini samanje izizukulwane ibhizinisi, idumela eliphezulu obesekwenziwe abantu nabaphathi eziningi amakhono. Akukhona uhambo olumnandi kakhulu ezingeni entry. Nokho, uma step kuze liyofeza imisebenzi ephakeme kanye izinqumo izinqubo, amaholo zakho kuqiniswa. Zonke udinga ngezinga ukuphathwa kusukela sikhungo eyaziwa kahle. Lena yindlela nabaphathi okwamanje imali ngobuningi. Izinkampani futhi niqhubeke ukukunikeza ozitholayo ahlukahlukene kanye umholo wakho.
Odokotela kudingeka kuzo zonke izinhlobo izimo eziphuthumayo kanye nekhono yabo lenani eliphakeme emphakathini. Uma kahle Imithi, ungase qhubeka ukuqala siqu umtholampilo yakho eyimfihlo lapho Imali kokubonisana kufika ku omningi. Ukuba udokotela akusho kuphela ukulanda imali kodwa futhi uyabavuza nawe eziningi idumela emphakathini. Ochwepheshe bezokwelapha kukhona lwezigaba ezahlukene, Ngokwesibonelo, odokotela bamazinyo, bamehlo njll.
indawo ye-indastri IT
umkhakha IT buyadlondlobala okwamanje. Ngobuchwepheshe esikhundleni wonke umsebenzi manual, izixazululo IT e nesidingo esikhulu. Kukhona okuningi ukuncika izicelo software nekhompyutha ngokusekelwe kulezi zinsuku. Ngakho, kukhona okuningi ithuba uthole isamba semali.
Chartered accountants futhi CFAs
Accountants liyisici esibalulekile kuwo wonke eqinile. Wena ukhokhelwe kaningi njengokuthanda kwakho kufunwe njengoba ingenye izidingo ebalulekile inhlangano. Ukuze ugcine izincwadi zabo njengoba yayinjalo, kuhlaziywe iyadingeka futhi ingxenye enkulu ohlelweni lokuhlela iyona ukuhlela zezimali zonyaka. Yingakho, CAS futhi CFAs abe ububanzi elikhulu embonini.
Ibhizinisi amadili uphawu ezindaweni ezahlukene, yingakho kunesidingo kokubili osomabhizinisi nabantu evamile ukundiza kaningi. Bakulungele ukuchitha omningi ezindizeni. Umkhakha yezindiza buyadlondlobala ngesivinini esimangazayo. Ngakho, pilot, indiza izikhonzi, abasebenzi phansi, emoyeni hostesses njll bayindlala.
Ezokuzijabulisa kuyinto umkhakha okuyinto phezulu kanye nekufaka ligalelo into enkulu emnothweni sisonke. Ubukhazikhazi umkhakha amadili ngemadlana ezimangalisayo kanye nezifundiswa like abadlali, onobuhle, abaculi sokuqongelela into omkhulu basuke bengabangane bengcebo ngaphandle indima yabo umkhakha ngokusebenzisa izimakethe. Uma sebezinikezele indlela ngokwabo, isibhakabhaka umkhawulo wabo.
Nge Ezimweni eziningi kangaka kulindile, abameli nazo bayindlala kakhulu. UMthetho nensimu emila uma ukhetha indlela efanele futhi ukunamathela ezimisweni zakho, you phetho abahola kokubili ingcebo ukwaneliseka. Kunezikhathi lapho ungase singadukiswa. Kokubhekana kunzima. Nokho, Uyithola ewina udumo, izinzuzo kanye nemali ekupheleni kosuku.
Ezemidlalo akuyona inkomishi yetiye wonke umuntu. Kodwa uma banamakhono futhi bathole amakhono ezinhle yezemidlalo efanele kusukela ebuntwaneni yakho, wena nje ukwenza ebunikazini ngokwakho emkhakheni. Akukhona umsebenzi olula, ngokuthembakala. kodwa, uma wenza ubuwena emkhakheni, uhola imali nje kusukela imidlalo udlala kodwa futhi ukwenza izimakethe nezikhangiso. Lokhu kuholela udumo ngendlela enhle kakhulu.
Okungenhla abaphezulu 8 okukhetha umsebenzi lapho nibusisiwe ngamaholo imali eningi nedumela ngesikhathi esifanayo. Nokho, omningi kanzima, ukuzinikezela elandelayo lungile dlela liyadingeka.
« Happy Australia usuku 2018 Wishes, Izilinganiso, SMS, imilayezo, Izithombe, Costumes
Incwadi eya kumhleli ngezinkinga amanzi egawula ngesikhathi yezimvula isizini »